ရှောက်ရွက်စားသုံးခြင်းဖြင့်ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူများ - Pyone Pyone Lay
မြန်မာလဆန်းရက်မှာ ရှောက်ရွက်ကို စားထားရင် အဲဒီတစ်လ လုံးလေမဖြတ်တော့ ဘူးလို့ ရှေးရိုးစကားရှိပါတယ်။ရှောက်ရွက် ကိုကြက်သွန်ဖြူ ၊ငြုပ်ကောင်းတို့နဲ့ ဟင်းခါးချက်ပြီးအမြဲ တမ်းသောက်ပေးရင် လေငန်းရောဂါပျောက် ပါတယ်။
ဒါတင်ပဲလား? မဟုတ်ပါဘူး၊ကမ္ဘာပေါ်မှာအဖြစ်များပြီး ၊အပျောက်နည်းတဲ့ ကင်ဆာရောဂါကို လည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်၊ ရှောက်ရွက်ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မကြီးထွားနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။
တစ်ပတ်ကို ၃/၄ ကြိမ်စားသုံးပေးရုံနဲ့ ကြိုတင်ကာ ကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ရှောက်ရွက်မှာ စိတ်ဖိစီးမှု ကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့ Astsiri အဆီဓာတ် တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး သူ့ အနံ့က ဦးနှောက်ကို စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ချတဲ့ ဟော်မှုန်းတစ်မျိုး ထုတ်လုပ်အောင် နှိုးဆွပေး တဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ် ခံနေရသူများ အထူးစားသုံးသင့်ပါတယ်
။ရှောက်ရွက်မှာ ပိုးသတ်ဆေး လိုမျိုး ပိုးမွှားတွေ ကိုသေစေနိုင် တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတဲ့ အတွက် ဖျားနာနေရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ခံအားကျ ဆင်းနေရင် ရှောက်ရွက်ကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ပွက်ပွက်ဆူနေ တဲ့ရေထဲကို ရှောက်ရွက်ခပ်ပြီး မနက်မိုးလင်းမှာသောက်ရင် ကိုယ်ခံအား ကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
အဝလွန်၊အနေခက်၊ အလှပျက်ကာ အဆီပို၊ဗိုက်ခေါက် ထူနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ခါးသေးရင်ချီ၊စလင်းဘော်ဒီဖြစ်ပြီး လူတကာတွေ ပြန်လှည့်ငေးရလောက်အောင်ဖြစ်ချင်ရင်တော.့…..? လွယ်ပါတယ်။
ပုလင်းလွတ် တစ်လုံးမှာ ရှောက်ရွက် (အရင့်) ၁၁ ရွက် (တချို့က ၉ ရွက်)ကိုထည့်၊ သကြားစားပွဲတင်ဇွန်း သုံးဇွန်းနဲ့ရေကျက်အေး(ရေသန့်လည်းရ) အပြည့်ဖြည့်၊လုံအောင်ပိတ်ပြီး နေပူပူမှာ ၁၁ ရက်လောက်နေလှန်းလိုက်ပါ။
ရက်ပြည့်သွားရင် မနက်တစ်ကြိမ်၊ညတစ်ကြိမ်(ပုလင်းလှုပ်ပြီး) လက်ဖက် ရည်ကြမ်းပန်းကန်လုံး တစ်ဝက်လောက် နေ့စဉ်မှန် မှန်သောက်သွားပေးရင် တစ်လနှစ်လအတွင်းမှာ အသားအရေစစ်သွားပြီး၊ အများငေးတဲ့ အလှပဂေး ဘော်ဒီလေးရသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်အသည်း အဆီဖုံးတာတွေ၊နှလုံးအဆီပိတ် တာတွေလည်းမဖြစ်တော့ ပါဘူး။ အချိန်မရလို့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ ရင်တောင်မှ အနည်းဆုံး တို့စရာအဖြစ်စားသုံးကြပါ။ အပြုတ်တွေ၊ ဟင်းချိုတွေ ထဲမှာ မီးဖိုပေါ်ကချခါနီး ခပ်သောက်ကြပါ။
အသုတ်တွေထဲမှာ လှီးထည့်ပြီး စားကြပါ။ ထမင်းကြော်စား တဲ့နေရာမှာလည်း(အနံ့လေးမွှေးအောင်) ရှောက်ရွက်လေးကို ညှပ်ထည့်ပြီး ကြော်စားကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်
မွနျမာလဆနျးရကျမှာ ရှောကျရှကျကို စားထားရငျ အဲဒီတဈလ လုံးလမေဖွတျတော့ ဘူးလို့ ရှေးရိုးစကားရှိပါတယျ။ရှောကျရှကျ ကိုကွကျသှနျဖွူ ၊ငွုပျကောငျးတို့နဲ့ ဟငျးခါးခကျြပွီးအမွဲ တမျးသောကျပေးရငျ လငေနျးရောဂါပြောကျ ပါတယျ။
ဒါတငျပဲလား? မဟုတျပါဘူး၊ကမ်ဘာပျေါမှာအဖွဈမြားပွီး ၊အပြောကျနညျးတဲ့ ကငျဆာရောဂါကို လညျးကာကှယျပေးပါတယျ၊ ရှောကျရှကျဟာ ကငျဆာဆဲလျတှကေို ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ မကွီးထှားနိုငျအောငျကူညီပေးပါတယျ။
တဈပတျကို ၃/၄ ကွိမျစားသုံးပေးရုံနဲ့ ကွိုတငျကာ ကှယျပွီးသားဖွဈသှား ပါလိမျ့မယျ။ရှောကျရှကျမှာ စိတျဖိစီးမှု ကိုလြှော့ခနြိုငျတဲ့ Astsiri အဆီဓာတျ တဈမြိုးပါဝငျပွီး သူ့ အနံ့က ဦးနှောကျကို စိတျဖိစီးမှု လြော့ခတြဲ့ ဟျောမှုနျးတဈမြိုး ထုတျလုပျအောငျ နှိုးဆှပေး တဲ့အတှကျ စိတျဖိစီးမှုဒဏျ ခံနရေသူမြား အထူးစားသုံးသငျ့ပါတယျ
။ရှောကျရှကျမှာ ပိုးသတျဆေး လိုမြိုး ပိုးမှားတှေ ကိုသစေနေိုငျ တဲ့အစှမျးလညျးရှိတဲ့ အတှကျ ဖြားနာနရေငျ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျခံအားကြ ဆငျးနရေငျ ရှောကျရှကျကို စားသုံးသငျ့ပါတယျ။ ပှကျပှကျဆူနေ တဲ့ရထေဲကို ရှောကျရှကျခပျပွီး မနကျမိုးလငျးမှာသောကျရငျ ကိုယျခံအား ကိုမွှငျ့တငျပေးပါတယျ။
အဝလှနျ၊အနခေကျ၊ အလှပကျြကာ အဆီပို၊ဗိုကျခေါကျ ထူနကွေတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ၊ ခါးသေးရငျခြီ၊စလငျးဘျောဒီဖွဈပွီး လူတကာတှေ ပွနျလှညျ့ငေးရလောကျအောငျဖွဈခငျြရငျတော.့…..? လှယျပါတယျ။
ပုလငျးလှတျ တဈလုံးမှာ ရှောကျရှကျ (အရငျ့) ၁၁ ရှကျ (တခြို့က ၉ ရှကျ)ကိုထညျ့၊ သကွားစားပှဲတငျဇှနျး သုံးဇှနျးနဲ့ရကေကျြအေး(ရသေနျ့လညျးရ) အပွညျ့ဖွညျ့၊လုံအောငျပိတျပွီး နပေူပူမှာ ၁၁ ရကျလောကျနလှေနျးလိုကျပါ။
ရကျပွညျ့သှားရငျ မနကျတဈကွိမျ၊ညတဈကွိမျ(ပုလငျးလှုပျပွီး) လကျဖကျ ရညျကွမျးပနျးကနျလုံး တဈဝကျလောကျ နစေ့ဉျမှနျ မှနျသောကျသှားပေးရငျ တဈလနှဈလအတှငျးမှာ အသားအရစေဈသှားပွီး၊ အမြားငေးတဲ့ အလှပဂေး ဘျောဒီလေးရသှားပါလိမျ့မယျ။
ဒါ့အပွငျအသညျး အဆီဖုံးတာတှေ၊နှလုံးအဆီပိတျ တာတှလေညျးမဖွဈတော့ ပါဘူး။ အခြိနျမရလို့ မလုပျဖွဈခဲ့ ရငျတောငျမှ အနညျးဆုံး တို့စရာအဖွဈစားသုံးကွပါ။ အပွုတျတှေ၊ ဟငျးခြိုတှေ ထဲမှာ မီးဖိုပျေါကခခြါနီး ခပျသောကျကွပါ။
အသုတျတှထေဲမှာ လှီးထညျ့ပွီး စားကွပါ။ ထမငျးကွျောစား တဲ့နရောမှာလညျး(အနံ့လေးမှေးအောငျ) ရှောကျရှကျလေးကို ညှပျထညျ့ပွီး ကွျောစားကွပါလို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ